Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Dalka Oo Shaaciyay In La Dhamaystirayo Sharciga Lagu Joojinayo Tacadiya Loo Gaysto Haweenka – Radio Daljir
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Dalka Oo Shaaciyay In La Dhamaystirayo Sharciga Lagu Joojinayo Tacadiya Loo Gaysto Haweenka
Luulyo 25, 2018 4:04 g 0
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka xukuummadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) oo hadal kooban ka jeediyay gebagebadii aqoon iswaydaarsi ku saabsanaa joojinta gudniinka gabdhaha ayaa soo jeediyay in meel looga soo wada jeesto ciribtirka dhaqanka haraadiga ah ee haweenka Soomaaliyeed u gaysta dhaawacyada Muuqda iyo kuwa dhanka maskaxda ah.
Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka go’antahay in la badbaadiyo gabdhaha iyo hooyooyinka Soomaaliyeed qorshuha xukuumnadduna yahay in si deg deg ah loo dhamaystiro shuruucda iyo siyaasadda looga hor tegayo xad-gudubyada iyo ficillada haraadiga ah ee dhibaataynaya bulshada gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed.
” lama aqbali karo in uu sii jiro gudniinka fircooniga ah. Innaga ayaa ka gaabinnay wax ka qabashada dhaqanka haraadiga ah ee tacadiyada nagu haya, waana hawl inoo wada taalla ka wacyi gelinta bulshada si loo cirib jaro gudniinka Gabdhaha, dhinacna uga soo wada jeesanno”, ayuu yiri Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Xukuummadda Federaalka Soomaaliya.
Ifraax Axmed, aasaasaha Mu’asasada Ifraax (Ifah Foundation) oo aqoon is-waydaarsiga soo qaban-qaabisay ayaa sheegtay in sababta tababarka ay ugu doorteen culimada iyo warbaahinta ay ahayd in ay ka abbaaraan bulshada meesha ugu mihiimsan ee fududayn karta wacyi gelinta si bulshada loogu baraarujiyo dhibaatooyinka laga dhaxlo gudniinka gabdhaha.
War-murtiyeed laga soo saaray tababarka ayaa lagu sheegay in looga dooday Sidii Soomaaliya looga joojin lahaa xadgudubyada Gudniinta, Sidii saxaafaddu u dardargalin karto kobcinta wacyiga dadka Soomaaliyeed ee ku aadan joojinta Gudniinka guud ahaan iyo Sameynta guddi culumaa’udiin oo si gaar ah xooga u saari doona joojinta gudniinka gabdhaha.
Tababarka oo loo qabtay xubna ka kala socda bahda warbaahinta iyo culimada oo ka yimid dawlad gobaleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya iyo gobalka Banaadir ayaa waxa ka qayb galayaashu ugu baaqeen dawladda Soomaaliya iyo hey’adaha caalamiga in ay qayb xooggan ka qaataan ololaha ka dhanka ah gudniinka gabdhaha Soomaaliyeed.
Guddoomiyihii Degmadda Balanbale oo xilka laga qaaday (dhegayso)